Introduce | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » Introduce
- ko moehein
Posted by ko moehein on Jul 15, 2012 in Copy/Paste |6comments
I want Myanmar Fonts in ‘ Add New ‘ . Please , guide me . Because of , I am new member of Mandalay Gazett .
About ko moehein
ko moehein has written 1 post in this Website..
My name is Moe Hein.I'm Engineer . I worked at Kyaukse , Home Designs and Constructions . I hope I haveanice here. Thank you, I'm sure I will .
View all posts by ko moehein →
ဆရာသမားများ ဝင်ပြီး ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်
Here is Myanmar Font (Zawgyi-One).
download, install and write in Myanmar language …
samsung galexy အမျိုးအစား ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာဖောင့် ထည့်နည်း အလွယ်ကူဆုံးးးးးး နည်းလမ်းလေးပါဗျာ…. အဆင်ပြေကြပါစေ…..
မသိသေးသောသူတွေအတွက်ပါ ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကျွမ်းကျင်လွန်း၍မဟုတ်ပါ ။ကျွန်တော့်ရဲ့ဖုန်းကိုထည့်ဖို့အိမ်မှာကြိမ်ကြိုးစားရင်းအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ samsung ဖုန်းများဟာ root လုပ်စရာမလိုပါ အလွန်ပဲ font သွင်းရ လွယ်ကူပါတယ် ။
Samsung galexy ဖုန်းတွေရဲ့ setting ထဲက display ဆိုတာပါပါတယ် အဲဒီအထဲမှာ font style ဆိုတဲ့ function ပါခဲ့ရင် အဆင်ပြေပြီလို့သာ မှတ်လိုက်ပါ ။ အရင်ဆုံး Internet connection တော့ရှိရပါမယ် ။
market or google play store ထဲမှာ fontomizer ဆိုတာကို ရိုက်ထည့်ပြီးရှာပါ ။ဒေါင်းပါ ။အဲဒါကိုဖွင့်လိုက်ရင်
a to z font တွေပေါ်လာပါမယ်။ z အထဲက zawgyi one ttf font ကိုဒေါင်းပါ install ပါ။setting>application>unknown source ကို အမှန်ခြစ်ပေးပါ။setting>display>font style ကိုဖွင့်လိုက်ရင်စောစောကဒေါင်းထားတဲ့ဇော်ဂျီကိုမြင်ရပါပြီ ။ရွေးလိုက်ပါ။restart လုပ်မလားမေးပါမယ် လုပ်လိုက်ပါ auto ပိတ်သွားပြီးပြန်ပွင့်လာချိန်မှာ ဖုန်းဟာဇော်ဂျီ ကိုအသုးံးပပြု ထားပါပြီ။အခုစာဖတ်လို့ရပါပြီ။ရေးလို့ရအောင် keyboard သွင်းရပါမယ် ။
ကျွန်တော်သိသမျှ keyboard အနည်းငယ်မှာ အကြိုက်ဆုံးက frozen keyboard မို့ သူ့ကိုပဲညွှန်ပါရစေ ။ Google မှာ frozen myanmar keyboard free download လို့ရိုက်ထည့်ရှာပြီး ဒေါင်းပါ installပါ ။setting>A & text ကိုဖွင့်ပါ ။
frozenkeyboard ကိုတွေ့ရပါမယ် ။သူ့ဘေးမှာအမှန်ခြစ်ပေးပါ။ပြီးရင်ဖုန်းရဲ့search လုပ်တဲ့စာရိုက်တဲ့အကွက်လေးကို long press ဖိလိုက်ပါ Input methodဆိုတာပေါ်လာပါမယ် နှိပ်လိုက်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့Keyboardတွေထဲက frozen keyboard ကိုရွေးချယ်ပါ ဒါဆိုရင် စာရိုက်လို့ရသွားပါပြီ။ကျွန်တော့လက်တွေ့အနေနဲ့ galexy s, galexy ace ,galexy y တို့မှာထည့်လို့ရပါတယ်ကျန်သော model ဖုန်းတော်တော်များများ ရမယ်လို့ ထင်ပါတယ် စမ်းကြည့်ပေါ့နော် function တူ အဆင်ပေလြိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ galexy ဖုန်းလေးတွေမှာ မြန်မာလိုရေးသားဖတ်ရှုပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ ခင်ဗျား ။ ။
ဇော်ဂျီကို ဖုန်းထဲဘယ်လိုထည့်ရမလဲမသိလို့ ဘယ်သူ့မေးရမလဲ စဉ်းစားနေတာနဲ့ အတော်ပဲ။
Setting -> Display ထဲမှာ Font Style ဆိုတာမတွေ့ဘူး။ Font size ပဲရှိတယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဟင်။ root လုပ်မှရတော့မှာလား။
Galaxy Nexus ပါ။